नेपाली सेना के का लागि ? » Khulla Sanchar
नेपाली सेना के का लागि ?
प्रधानमन्त्री ज्यू! तपाईले काठमाडौमा स्वाभिमानका कुरा गर्दैगर्दा उता दक्षिणी दुष्ट छिमेकी ले देशको माटो मिचेर स्वाभिमान स्वाहा.. गर्दै दैनिक देशको जमिन मिचिरहेको छ। गरिब नेपाली किसानको गाँस बाँस खोसिदै छ।देशका ती हज्जारौं सैनिकलाई ब्यारेक भित्र मासु भात खुवाएर पाल्नलाई मात्र राखेको होकि देशको रक्षा गर्न ? देशको माटोको कसम खाएर देशको रक्षाका निम्ति लड्ने भनेका सेनाको खास् काम केहो ? त्यै फास्ट ट्र्याकको बाटो खन्न नेपाली सेनामा भर्ती हुने हो ? अनि टुडिखेल मा परेट देखाउने मात्र सैनिक को काम हो?
मोदीलाई काठमाडौमा रातो कार्पेट बिछ्याउदै गर्दा उता सिमानामा तिनै मोदीका खेतालाले एउटा सार्बभौम देशको माटो कुल्चिरहेका छन्, हेपिरहेका छन् । अब मोदीलाई स्वागत मात्र गर्ने कि सचेत पनि गराउने ? कि स्वाभिमानका नारा छोड्नुस् कि सिमानाको हेपाह प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नतिर लाग्नुस्। केको डर छ तपाईलाई ? अब के लिनु र दिनु छ तपाईलाई?
न आफ्ना सन्तान छन्, नत अब कसैका लागि सम्पत्ति नै जोड्नु छ। देश मिचिदा यो मौनता किन ? मेरो देशलाई हेपेको देख्दा मलाई IsIs मा भर्ना भएर भारत छिर्न मन लाग्छ। त्यो आक्रोश ‘म’ मा भन्दा अगाडी तपाईमा आउनुपर्यो। देशको अभिभावक तपाई हो। साला गुलामहरुले हाम्री आमालाई कुल्चेको टुलुटुलु हेर्नेलाई नालायक,काँतर सन्तान भन्छन् प्रधानमन्त्री ज्यू। तपाईलाई म त्यो रूपमा हेर्न कदापि चाहान्न। स्वाभिमान जोगाउनुस्। तपाईमा त्यो दम छ। मैले बुझेको छु तपाईलाई। मैले देखेको,भेटेको र बुझेको केपी बन्नुस्।
सबै कुरा सहन तयार हुन्छु तर,देश रोएको हेरेर,सहेर बस्न सक्दैन। खै किन हो त्यो माटोको मलाई आफ्नो ज्यानको भन्दा बढ्ता माया लाग्छ।देशको स्वाभिमानमा यसरी बलात्कार हुदा सम्म लाचार बन्दै हेरेर बस्ने मुलुकको साशक, अधिकारकर्मी,पुलिस प्रशासन र स्वयंम हामी आम नागरिकको मौनता देख्दा धिक्कार्न मन लाग्छ। आफुले आफैलाई धिक्कार्न मन लाग्छ।
मिचिदा टुलुटुलु हेरेर बस्ने हामी सबैलाई जन्मेको माटोको श्राप लाग्छ । कस्सम् पाप लाग्छ।